Ny lalao fitifirana tsara indrindra ho an'ny PC | Vaovao momba ny gadget
Paco L Gutierrez | 30/12/2020 10:00 | Nohavaozina amin'ny 30/12/2020 16:37 | General, Videogames
Raha misy karazana miavaka amin'ny sehatra PC hafa, dia izany ny Shotters (lalao fitifirana). Io an-tserasera io no anaovana fampiasa matetika ireo lalao ireo, manana katalaogy be daholo, na amin'ny olona voalohany na amin'ny olona fahatelo. Afaka mahita lalao fifaninanana ihany koa isika, izay mampiakatra lanja ny lafiny an-tseraseraMaro amin'ireo lalao an-tserasera ireo no hitantsika ao amin'ny Esports. Ny filalaovana klavie sy totozy dia manome toerana betsaka hanatsarana azy, satria lasa mora kokoa ny mikendry rehefa mifindra.
Ao anatin'ny sokajin'ny lalao fitifirana, hitantsika ireo mahazatra miaraka amin'ny maody fampielezan-kevitra, izay misy tantara tsara voaraka amintsika, ireo lalao mifaninana amin'ny lalao ekipa, izay ilana fiaraha-miasa amin'ireo namantsika ho mpandresy, na ny ady royale, izay ahitantsika ny ekipa tsara indrindra amin'ny sari-tany dia manampy antsika handresy ny lalao, na irery na miaraka amin'ny hafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny lalao fitifirana tsara indrindra ho an'ny PC.
1 Antson'ny adidy: WarZone
2 DOOM Mandrakizay
4 Halo: Mpampianatra Lehiben'ny Collection
5 Rainbow Six: Toeram-Pamonjena
8 Fiainana antsasaka: Alyx
Antson'ny adidy: WarZone
Tsy mety tsy ho hita tampoka izany, ny Call of Duty dia nahavita namorona lalao mbola tsy nisy toy izany nanatsara ny zavatra hita tamin'ny Blackout in Call of Duty Black Ops 4. Sarintany goavambe mifototra amin'ny sarintany Modern Warfare 2 miaraka amin'ny faritra midadasika izay misy mpilalao 150 mifampihaza mandra-pijoroana farany. Ny lalao dia manana fomba maoderina marobe, izay ahafahantsika milalao tsirairay, duos, trios na quartets, mamorona ekipa miaraka amin'ireo namantsika amin'ny alàlan'ny Internet. Ny lalao koa dia manome antsika maody lalao sasany amin'ny endrika hetsika, toy ny Halloween na Krismasy.
Ity lalao ity dia manana lalao cross-platform, koa raha ampiasaintsika izy io dia hiditra amin'ny ady miaraka amin'ireo sehatra rehetra misy ny lohateny, ireo dia PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S. Raha tsy te-hiampita ny lalao isika handanjalanjana ny refy, dia azontsika atao ny mamono azy amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity lohateny ity dia maimaimpoana tanteraka, manolotra fandoavam-bola ao anatin'ny fangatahana hividy fitaovam-piadiana na hoditra toetra. Ny zava-dehibe dia tsy manome tombony ireo fandoavam-bola ireo, afaka mividy ady amin'ny € 10 koa isika.
Ny tohiny mivantana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny loka nalefa tamin'ny 2016 novolavolain'ny ID Software, izay tadiaviny hanolotra ny fitambarana haingam-pandeha sy haingam-pandeha ary afo mety indrindra. Misongadina amin'ny lalao tsirairay ny lalao izay manome antsika mpiady mahatalanjona amin'ireo zavaboary avy any ambanin'ny tany izay ny zavatra miavaka indrindra dia ny habibiasan'izy ireo, noho ny Gore natolotr'izy ireo. Ao amin'ny DOOM Mandrakizay, ny mpilalao dia mandray ny andraikitry ny mpamono olona ho faty (DOOM Slayer) ary miverina hamaly faty amin'ny herin'ny helo isika.
Ny lalao dia misongadina ihany koa amin'ny feon-kira miavaka sy fizarana hita maso manala ireo hiccups tsy ijerena ny sehatra anaovantsika azy, fa amin'ny PC kosa no ahafahantsika mankafy azy amin'ny hakantony rehetra, amin'ny fampiasana Framerate avo be amin'ny 144Hz mpanara-maso.
Raiso ny tolotra DOOM Mandrakizay amin'ny Amazon amin'ity rohy ity.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo lalao malaza indrindra tato ho ato, nanjary zava-niseho marina, lalao nolalaovin'ny antitra sy ny tanora. Izy io dia Battle Royale izay handresen'ny ekipa na mpilalao farany nijoro. Tokony hizaha ny sari-taniny lehibe hikarohana fitaovana hiadiana amin'ny mpifaninana isika. Toa an'i WarZone, manana crossover play izy roa ka samy milalao ny Gamers PC sy console avokoa raha misafidy izy ireo.
Fortnite dia miavaka amin'ny sisa amin'ny Battle Royale noho ny hatsarana kanto sy ny fomba fijerin'ny olona fahatelo, izy io koa dia manana rafitra fananganana izay manome karazany maro ho an'ny lalao. Raha mitady lalao mahafinaritra hilalaovana miaraka amin'ny orinasa ianao, miaraka amin'ny hatsarana tsy dia matotra, dia azo antoka fa safidy lehibe izany. Maimaimpoana ny lalao, manana fividianana ao anaty rindrambaiko ianao amin'ny alàlan'ny vola virtoaly izay tsy maintsy vidinay teo aloha. Azontsika atao ihany koa ny mahazo ny valin'ny ady ahazoana ireo fanampiny miorina amin'ny filalaovana azy.
Halo: Mpampianatra Lehiben'ny Collection
Ny Master Chief dia kisary Xbox ary azo alaina amin'ny mpilalao PC rehetra ankehitriny, fotoana iray hilalaovana ilay Halo saga iray manontolo. Kitapo misy Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 ary Halo 4. Izy rehetra miaraka amina vahaolana tsara kokoa sy fanatsarana ny zava-bita, lalao misy maodely ho an'ny mpilalao tokana lalina, hankafizanao ny iray amin'ireo sagas tsara indrindra novokarin'i Microsoft irery.
Ho fanampin'izany, Microsoft dia nampiditra mpizara marobe natokana ho an'ny multiplayer, mankafy ny lalao cross eo anelanelan'ny Xbox sy PC ny lalao, ka tsy hisy ny tsy fahampian'ny mpilalao amin'ny lalaoo. Miaraka amin'ny fomba fijerin'ny olona voalohany sy ny fahavalo vahiny izay hametraka antsika hanohitra ny tady sy lalao mahafinaritra be.
Get Halo: Ny Master Chief Collection amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Steam amin'izany rohy.
Rainbow Six: Toeram-Pamonjena
Lalao iray hafa manasongadina ny lafiny mifaninana aminy, ity no fizarana farany ao amin'ny santa fantatry ny Rainbow Six an'i Tom Clancy, izay misy ny mpilalao tokana, ny fiaraha-miasa ary ny mode multiplayer 5 v 5. Miorina amin'ny ady ataon'ny polisy sy ny mpampihorohoro, raha ny Mipetraka ao anaty rafitra ny mpampihorohoro, ny ekipan'ny polisy dia tsy maintsy mamono azy ireo amin'ny fomba isan-karazany amin'ny fanafihana. Ny lalao dia misy kilasy telopolo zarain'ny zom-pirenena, ny tsirairay amin'izy ireo manokana amin'ny karazana fitaovam-piadiana na fahaizana.
R6 dia mankafy ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina PC matanjaka indrindra, mifantoka amin'ny lanja amin'ny Internet sy Esports ny lanjany lehibe indrindra. Hatramin'ny nanombohany ny taona 2015, ny lalao dia tsy nitsahatra nahazo fanavaozana maimaim-poana sy vanim-potoana manome fiainana tsy manam-petra, ankoatry ny fanamaivanana ny bibikely izay mipoitra na ny fidiran'ny mpanao hosoka. Ny lalao amin'izao fotoana izao dia manana vidiny tena manintona, azo lalaovina irery izy ity fa atoro anao hilalao izany miaraka amin'ny namana hankafizanao azy.
Makà Rainbow Six: fahirano amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Steam amin'izany rohy.
Mety tsy ho diso amin'ity lisitra ity, avy amin'ny mpamorona ny Titanfall, ny Respawn Entertainment dia namoaka ny tsara indrindra tamin'ny sangan'i Titanfall, na dia nandà ny anarany aza izy, dia tsy nanao izany tamin'ny fanahin'ny franchise niaraka tamin'ny mikorontana sy adala gameplay. Ny lalao dia manana sari-tany lehibe izay hiatrehantsika mpilalao na ekipa marobe amin'ny ady izay handresy izay farany, toy ny ao amin'ny Battle royale.
Asongadinay ireo karazan'endrika isan-karazany, izay ahitanay ny fahaiza-manao manokana, toy ny robot miaraka amina hook izay hanampy azy hahatratra ireo sehatra avo lenta. na toetra mahay mampiasa haingam-pandeha na mamorona sehatra hitsambikina izay hitondra antsika any amin'ny faran'ny sari-tany hafa. Izy rehetra dia miaraka amina fitaovam-piadiana isan-karazany izay ahafahantsika manampy kojakoja ingame, koa raha mahazo basy tsy misy fitaovana isika dia afaka manampy azy ireo rehefa mahazo azy ireo na maka azy amin'ny fahavalo latsaka. Maimaimpoana ny lalao amin'ny fandoavam-bola amin'ny fampiharana.
Makà Apex Legends amin'ny Steam amin'izany rohy.
Ny farany an'ny saga Metro, mifototra amin'ny tontolo aorian'ny apokaliptika izay itondran'ny biby goavambe ny arabe, ny lalao dia mitantara ny tantaran'i Artyom, ilay mpandray anjara tamin'ny lalao teo aloha, momba ny iraka nampanaovina azy ireo hanomboka fiainana vaovao any atsinanan'i Russia mangatsiaka. Ny lalao dia manasongadina ny toetr'andro mihetsiketsika miaraka amin'ireo dingana amin'ny alina sy andro amin'ny sari-tany lehibe izay manafina tsiambaratelo maro sy fotoana mampatahotra.
Ny Exodus dia manana fivoarana misokatra sy tontolo miova izay zava-dehibe toy ny ady amin'ny zava-boahary ny fitrandrahana sy ny loharanon-karena. Tsy manana multiplayer izany, zavatra hafahafa hita amin'ny lalao mpitifitra olona voalohany, fa ankasitrahana fa tsy hadinonao fa ny fitifirana ilay olona voalohany dia mety hitondra tetika any aoriana koa. Ny feon-kira ao amin'ny lalao dia manampy amin'ny filentehana ao anaty izao rehetra izao.
Alao ny lalao amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ity Rohy Steam.
Fiainana antsasaka: Alyx
Farany fa tsy latsa-danja dia manonona ny iray amin'ireo tsy ampoizina amin'ny taona 2020 izahay, io no ampahany farany amin'ny Half Life. Tsia, tsy ilay Half Life 3 antenaina izany, ny Alyx dia lalao vaovao iray izay mampiasa ny zava-misy virtoaly hitaterana antsika amin'izao rehetra izao Half Life amin'ny fomba mety indrindra. Ny zava-nitranga teo amin'ny tantarany mahatalanjona dia mametraka antsika eo anelanelan'ny lalao voalohany sy faharoa amin'ilay saga ary mametraka antsika amin'ny kiraron'i Alyx Vance. Ny fahavalo dia mihamatanjaka sy mihamatanjaka, raha ny fanoherana kosa dia manangona miaramila vaovao hiady aminy.
Tsy misy isalasalana fa ity no lalao virtoaly tsara indrindra hatreto, hankafizintsika izy roa noho ny fitantarany sy ny filalaovany azy, miavaka ny faharetany na eo aza ny lalao VR, izay mazàna manota maharitra fohy. Ny fipetrahany dia izay andrasan'ny mpankafy ny andian-tantara rehetra, miaraka amin'ny atmosfera sy toerana tsy mampino ahafahantsika mifanerasera amin'ny singa rehetra hitantsika. Miasa tsy an-kijanona ny fokonolona hamorona mods sy hanitatra ny lalao. Ny lalao dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo tena mitaky amin'ny PC, ka mila fitaovana maoderina isika, ary koa solomaso mifanentana.
Raiso ny antsasaky ny fiainana: Alyx amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ity Rohy Steam.
Raha tsy mitifitra ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity fahazoan-dàlana izahay lalao mitondra fiara, manolotra anao koa izahay tolo-kevitra momba ny lalao velona.
Raha tsy manana PC ianao dia azonao atao ny mijery an'ity lahatsoratra ity aiza izahay dia manoro hevitra ny lalao ho an'ny PS4 na ity hafa aiza izahay dia manoro hevitra ny lalao finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Ny lalao fitifirana tsara indrindra ho an'ny PC
Melomania Touch, headphone mahafinaritra avy any Cambridge Audio